Irreecha: Sirna Irreechaa namoota jaha irraa hanga miiliyoona jahaatti - BBC News Afaan Oromoo
'Silaa Adaamaan kana caalaa guddatti ture'
Jaarraa 16ffaatiin asitti garuu babal'in amantaa Kiristaanaa fi Islaamaan wal qabatee sirni Gadaas tahe kabajni ayyanichaa laafaa dhufee jedhu obbo Alamaayyoon.
Bara bulchiinsa Minilik keessa kabanji ayyana Irreechaa akka malee dadhabaa dhufe. Oromootnis dhokachuudhaan kabajuuf yaalaa akka turan qorattotni seenaa lafa kaa'u.
Bara Haayilesillaasee fi Dargii Manguddota Liiban, Galaanii fi Handaatu dhokatanii subii ka'uun namootni xiqqoon dhaqanii irreefatanii galaa turan kan jedhan ammoo baObbo Dirribii Damusseeti.
Madda suuraa, Anadolu Agency
Waldaan Maccaa fi Tuulamaa erga hundeeffamee mirga Oromoo, Tokkummaa Oromoof fi misooma Oromoof qabsoo gaggeessaa waan tureef Irreechi akka deebi'uuf dhaaba shoora olaan bahate akka tahe Obbo Alamaayyoon dhugaa bahu.
Haa tahu malee Waladaan Maccaaf Tuulamaa fi ABO'n waliiti qabamuun akka balaaleffatamu gochuun mootummaan tarkaanfii irratti fudhataa turuu himu.
Namootni akka Lammii laggasee fi Fayisaa Dirribsaa fa'a jedhaman yoo uummata keenya baay'inaan nuuf fidde jennee daabboo lama lama wareeganii galan jedhu Obbo Dirribiin.
''Anis yaa waaqayyo yoo saba kana gara eenyummaa fi aadaa isaatti nuuf deebiste jedheen achuma dhaabbadhee wareega wareege,'' jedhan Obbo Dirribiin.
''Ani Irreechi maal akka tahe wal tajjii irra dhaabadheen namoota muraasa achi jiraniif ibse. Amantaa seexanaa akka hin taanes, duudhaa uummata keenyaa tahuu fi waaqa tokkichaaf galata galchuu akka tahen dubbadhe.
Obbo Alamaayyon ammoo bara 1993 deegartootni ABO fi ODP [Dh.D.U.O] walitti bu'anii waan tureef akka irreechi kan paartii kamiiyyuu hin taaneef irratti hojjetamaa turee furamuu himan.
Irreechi bara 2018 Hora Arsadiitti haala ho'aan kabajamaa jira
Keessumaa Irreecha bara 2008 irratti namootni Miiliyoona jahaa ol tahan argamuu Obbo Alamaayyoon himu. Kanuma irraa ka'uun sirni Gadaa akka adunyaa irratti beekamu taasiseera jedhan.
"Iddoon ija koo itti dhabedha," Irreecha 2016
Barri kun uummata keenyaaf bara injifannoo gurguddaa ture, bara rakkinni siyaasaa guddaan jiruyyu miiliyoonotaan bahee irreefachaa kan ture bara kana immoo garmalee dabaluu danda'a jedhu.
Viidiyoo, Irreecha bara 2016: Battala gammachuun gaddatti jijjiiramte
Irreecha: Badhaasni Nagaa Irreechaa jalqabaa kennamuufi
13 Fuulbaana 2018
Booji'amtoonni waraanaa maalii, kunuunsa maalitu malaaf?
Mutroo Siwiidiniifi Finlaand NATOtti makamuuf jedhan US ni deeggarti- Baayidan
Qodaan abaaboo durii kutaa nyaata itti bilcheefatan keessa ture doolaara Min. 78tti gurgurame
Dhibee 'Monkeypox' jedhamu Ameerikaa, Awurooppaafi Awustiraaliyaatti mul'ate
Jaalalleewwan lootarii paawondii miiliyoona 184 mo'achun riikardii haaraa galmeessa
Kooriyaan Kaabaa lammileen ishee 'sha'iifi soogiddaan' COVID ofirraa ittisaa jette